You are at:Home » Category: "Visual Aids"
Browsing: Visual Aids
Publication Visual Aids
ပွညျသူ့ရေးရာနှငျ့ နိုငျငံရေးအခှငျ့အရေးစာခြုပျ (ICCPR) မှာပါတဲ့အခှငျ့အရကေို ကနျ့သတျလို့ ရ၊ မရ ကဒျပွားလေးတှကေို လလေ့ာကွရအောငျ။
ပွညျသူ့ရေးရာနှငျ့ နိုငျငံရေးအခှငျ့အရေးစာခြုပျ (ICCPR) မှာပါတဲ့အခှငျ့အရေးတှကေို လိုအပျလို့ လိုအပျသလောကျ ဆိုငျးငံ့ကနျ့သတျမယျဆိုရငျတောငျ လုပျခငျြတိုငျးလုပျလို့မရပါဘူး။ လိုကျနာရမဲ့ လုပျထုံးလုပျနညျးတှရှေိပါတယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို ကဒျပွား (၁) မှာ ရှငျးပွထားပါတယျ။ ကိုဗဈရောဂါ…
လူ့အခွင့်အ ရေးချိုးဖောက်ခံရသဖြင့် တိုင်ကြားမည်ဆိုလျှင် If you want to report human rights violations
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရလျှင်တိုင်ကြားနိုင်မည့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ်များကို လက်ကမ်းစာစောင်အဖြစ် ထုတ်ဝေဖြန်ချိထားပါသည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့် (၁) (၂) English (1) (2)
နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးစာချုပ်
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) “နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးစာချုပ်”ကို အများပြည်သူ…
ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂသဘောတူ စာချုပ်
ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂသဘောတူ စာချုပ်အကြောင်းနှင့် အခွင့်အရေးများကို လက်ကမ်းစာစောင်လေးဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် ညီမျှခြင်းမြန်မာအဖွဲ့တို့မှ ပူးပေါင်းပြီး ပထဦးဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။ ထိုစာချုပ်ကို…
နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စာချုပ် ပိုစတာ
ညီမျှခြင်းမြန်မာမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာကာလအတွင်းပြုလုပ်သွားမည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပြများနှင့် သင်တန်းများတောင်းခံနိုင်
ညီမျှခြင်းမြန်မာမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးခြင်း သင်တန်းများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကိုပို့ချပေး လျက်ရှိသည့်အပြင် မြန်မာပြည် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အနှံ့မှ တောင်းဆိုလာသောသင်တန်းများကို ပို့ချပေးသွားရန်အတွက် အစီအစဉ်များစွာရှိသည်။…
This poster on Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) Specifications Publisher: Equality Myanmar Dimension:…
Battle field is not the playground for children
In Burma, both Burmese and ethnic armed groups had been using child soldiers. There are…
Yorgyarkatar Principles Poster
This poster is about all human beings are born free and equal in dignity and…
This poster aims to encourage men to respect women’s rights. It portraysafather explaining…